साह्रै रमाईलो लाग्यो! अरु पनि जाओस्!
तेही भएर अरुलाई हेप्ने र लुट्ने प्रब्बितीलाई बाँदरे प्रब्बिती भनिएको होला.. बाँदर सँग निकै संगत रहेछ.. तपाईंलाई थाहै होला... जङल का बाँदर भन्दा शहरिया बाँदरहरु धेरै धुर्त र अटेरी हुन्छन
मैले पनि भर्खरै बाँदरकै बारेमा लेखेको थीएँ । यता पनि बाँदरकै चर्चा भएको रहेछ ।
तर तपाईको पोष्टमा बयान गरिएको बाँदरलाई तपाईले जत्ती खराव दर्शाए पनि मेरा बाँदरका अगाडि भने यीनिहरु साधु ठहर्ने रहेछन ।
जे होस पोष्ट भने रमाईलो लाग्यो ।
हैन अहीले सबै साथिहरू बाँदरको किन पछी पर्नु भएको ??? खै एउटा पोष्ट बाँदरको बारेमा लेखुम भनेको कोहीपनि भेटीएन...............
रमाईलो लाग्यो । कसैमाथि व्यङग्य पो हो कि भन्ने लागेको थियो सुरूमा तर कुरा पुर्ण निश्पक्ष रहेछ । झनै खुसी लाग्यो । वास्तवमा पशुपति, स्वयम्भू तिर बादरसँग बाक्लै भेटघाट भएपनि आनीबानीको बारेमा भने मलाई साह्रै थाहा थिएन । अब त म पनि अरूलाई बाँदरका कथा सुनाउँने भएँ!!!
तपाइहरुले भने जस्तै यसपटक भने बांदर सप्ताह नै भएछ कि क्या हो।
दिलीपजी को कथामा छोरो भन्दा असल बांदर थियो। तर हाम्रा गाममा पाइने बांदरलाइ भने धपाउन छोरो नै पठाउनु पर्छ। छोरी पठायो भने त कांहा टेर्नै? रुखको हांगामा यताबाट उता, उता बाट यता गरेर नै झुक्काउंछन। अहिले त नेपालमा समानताको कुरो उठेको छ,यी बांदरको दिमागमा पनि केही घुस्योहोला कि? नत्र भने यिनीहरुलाइ पनि बांदर अदालतमा ठडाउनु पर्छ।
बांदरका कथा मात्र होइन ब्यथा पनि उतिक्कै छन, सबै बिस्तारै बाड्दै जाउंला।
It sounds really funny! कहिले कांहि त बाटोमा होइन घरमै आउंथे। घरमा भेटघाट गर्न त के हुन्थ्यो र उही कांक्रा,घिरौंला के के छन तिनै खान आउथे।